Acne (ဝက်ခြံ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Acne (ဝက်ခြံ)
Acne (ဝက်ခြံ) ကဘာလဲ။
သင်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်နီးပါးဖြစ်နေပြီ ဆိုလျှင် သင့်မှာ ဝက်ခြံပေါက်နိုင်ချေ အလွန်များပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်မရောက်ခင် အရွယ် ၁၀ ယောက်မှာ ၈ ယောက်က တခြား ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် နှင့် လူကြီးတွေနဲ့ အတူ ဝက်ခြံရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လူဦးရေ ၁၇ သန်းလောက်မှာ ဝက်ခြံရှိကြပါတယ်။ ဝက်ခြံက ကလေးတစ်ယောက်ကနေ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ သင်္ကတအနေနဲ့ လူသိများပါတယ်။
သို့သော်လည်း သင့်ကိုယ်သင် မှန်ထဲကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ မေးစေ့မှာ ဝက်ခြံကြီး ပေါက်နေတယ်ဆိုလျှင် အတော်နေရခက်ပါတယ်။ သတင်းကောင်းကတော့ ဝက်ခြံအကြောင်းလေ့လာပြီး သာမာန်နည်းလမ်း ရိုးရိုးလေးတွေ လိုက်လုပ်ရုံနဲ့ သင့်မျက်နှာ အတွက် စိုးရိမ်စရာ မလိုလောက်တော့ပါဘူး။
ဝက်ခြံဆိုတာက အဖုပုံစံအမျိုးမျိုး အနေနဲ့ ပေါ်လာတဲ့ အရေပြားဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုပါ။ ၎င်းတို့မှာ ထိပ်ဖြူ၊ ထိပ်နက်၊ အနီဖု ( pimples ) နှင့် ပြည်ဖု (pustules) လေးတွေ အနေနဲ့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဘာတွေကြောင့် ဒီအဖုလေးတွေက စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာ ကောင်းစေရတာလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်အရေပြားမှာ ချွေးပေါက်ဆိုတဲ့ အပေါက်သေးသေးလေးတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ဒီအပေါက်လေးတွေမှာ သင့်အရေပြားနှင့် မွှေးညှင်းတွေကို စိုစွတ်စေတဲ့ အဆီ(sebum-ဆီးဘမ်)ထုတ်ပေးတဲ့ အဆီအိတ်လေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ဒီအဆီအိတ်လေးတွေက အဆီပမာဏမှန်မှန်ကန်ကန်ထုတ်ပေးပြီး ချွေးပေါက်လေးတွေလဲ ဘာမှမဖြစ် ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။ တခါတရံမှာ ၎င်းချွေးပေါက်လေးတွေက အဆီများခြင်း၊ ဆဲလ်သေတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေနဲ့ ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဝက်ခြံဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါပဲ။
ချွေးပေါက်က အဆီများကာ ပိတ်သွားပြီး အရေပြားကနေ ကျွတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုလျှင် ၎င်းဝက်ခြံကို ထိပ်ဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်။ ချွေးပေါက်က အဆီများနေသော်လည်း ပွင့်နေလျှင် ထိပ်မျက်နှာပြင်က မဲနေနိုင်ပြီး ထိပ်နက်ဝက်ခြံ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံချွေးပေါက်တွေရဲ့ နံရံများ ပျက်စီးပြီး အဆီ၊ ဘက်တီးရီးယားနင့် ဆဲလ်သေတွေကို အရေပြားအောက်ထဲ ဝင်လာစေပါတယ်။ ဒီလို ဝင်လာစေခြင်းက အနီဖု (pimple) ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ အဆီများနေတဲ့ ချွေးပေါက်က အရေပြားအောက် နက်နဲတဲ့အထိ ပွင့်နေလျှင် ပိုကြီးတဲ့ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ အရည်အိတ် (ပြည်အိတ်)တွေပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Acne (ဝက်ခြံ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကလေးတော်တော်များများ နှင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ acne vulgaris လို့ခေါ်တဲ့ ဝက်ခြံအမျိုးအစား ပေါက်ကြပါတယ်။ ၎င်းက သူတို့ရဲ့ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ပုခုံး၊ ကြောအပေါ်ပိုင်းနှင့် ရင်ဘတ်တွေမှာ ပေါက်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေနှင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေက သူတို့ပျိုဖော်ဝင်ခြင်းအလိုက် ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဝက်ခြံပေါက်ကြပါတယ်။ သင့် ခန္ဒါကိုယ် ဖွံဖြိုးလာတာနဲ့ အမျှ ၎င်းဟော်မုန်းတွေကလည်း အဆီအိတ်တွေကို အဆီပိုထုတ်စေပြီး overactive ဖြစ်လာပါမယ်။ အဆီအလွန်များတဲ့ အခါမှာ ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်စေပြီး ဝက်ခြံဖြစ်လာပါတော့တယ်။
သင့်မိဘက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက ဝက်ခြံပေါက်ဖူးတယ်ဆိုလျှင် သင်လဲ ပေါက်နိုင်ချေများပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုက ဝက်ခြံကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ကံကောင်းစွာဖြင့် အများစုကတော့ အသက်၂၀ ထဲဝင်လာလျှင် သက်သာသွားကြပါတယ်။
Acne (ဝက်ခြံ) ကို ဘာလုပ်လို့ရလဲ။
သင်ဟာ ဝက်ခြံကို စိုးရိမ်တယ်ဆိုလျှင် အောက်ပါအချက်တွေက လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဝက်ခြံကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံဖြစ်ဖို့ အဆီစုစည်းမှုမှ ကာကွယ်ရန် တစ်နေုကို တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ် မျက်နှာကို ရေနွေးနှင့် ဆပ်ပြာအပျော့ သို့ မျက်နှာသစ်ဆေးဖြင့် သစ်ပေးပါ။
မျက်နှာကို မကုတ်ပါနဲ့၊ ကုတ်ခြင်းက ဝက်ခြံကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာ ကို ညင်ညင်သာသာ သစ်ပေးပါ၊ အဝတ်မသုံးပဲ လက်ဖြင့်ပဲ သစ်ပါ။
သင်ဟာ မိတ်ကပ်၊ moisturizer ၊ သို့ နေလောင်ကာတွေလိမ်းမယ်ဆိုလျှင် အဆီမပါတာ “noncomedogenic” သို့ “nonacnergenic” တွေကိုပဲ ရွေးသုံးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
သင်မျက်နှာ သစ်တဲ့အခါ သင့်မိတ်ကပ်တွေအားလုံးဖျက်ဖို့ အချိန်ပေးပါ။
သင်ဟာ ဆံပင်ဖျန်းဆေး သို့ ဂျဲလ်တွေ သုံးမယ်ဆိုလျှင် မျက်နှာနှင့် မထိအောင် သတိထားပါ။ ၎င်းတို့က ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်စေနိုင်လို့ပါ။
သင်ဟာ ဆံပင်အရှည်ရှိတယ်ဆိုလျှင် မျက်နှာနှင့် မထိအောင် သတိထားပြီး အဆီမပြန်အောင် မှန်မှန်လျှော်ပေးပါ။
ဘေ့စ်ဘော ဦးထုပ်တွေနင့် တခြားဦးထုပ်တွေကလည်း ဆံစပ်မှာ ဝက်ခြံပေါက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဦးထုပ်တွေက သင့်ဝက်ခြံကို ပိုဆိုးစေနိုင်တယ်ဆိုလျှင် ၎င်းတို့ကို ရှောင်ပါ။
သင်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ချွေးအလွန်ထွက်ထားလျှင် မျက်နှာသစ်ပါ။
သင့်မျက်နှာကို အတတ်နိုင်ဆုံး မထိမိအောင် ကြိုးစားပါ။
ဝက်ခြံတွေကို ဆိတ်ခြင်း၊ ညှစ်ခြင်း သို့ ဖောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
ဆေးဆိုင်တွေမှာ ဝက်ခြံပျောက်ဆေး လိမ်းဆေးတွေ ရောင်းပါတယ်။ တစ်မျိုးချင်းဆီ စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး ဘယ်ဟာက အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။benzoyl peroxide ပါတဲ့ ထုတ်ကုန် သို့ salicylic acid ပါတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေက ဝက်ခြံကုသတဲ့ နေရာမှာ တော်တော် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။Benzoyl peroxide က ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို စေစေနိုင်ပြီး အဖုတွေရောင်ခြင်းကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။salicylic acid က နောက်ထပ် ဝက်ခြံတိုက်ဖြတ်ပေးတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက အရေပြားကို ခြောက်ပြီးကွာကျစေတဲ့အတွက် အဖုတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ဖြစ်စေပါတယ်။
ဝက်ခြံပျောက်ဆေးတွေ ဝယ်သုံးတော့မယ်ဆိုလျှင် ညွှန်ကြားချက်တွေကို သေချာလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။ လိုတာထက် ပိုသုံးမိလျှင် သင့်အရေပြားကို နီပြီး ခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးနှင့် တည့်မတည့်ကို အရင် အနည်းငယ်စမ်းသုံးကြည့်တာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ရက်မှာ မသက်သာတာနဲ့ စိတ်ဓါတ်မကျလိုက်ပါနဲ့။ ဝက်ခြံပျောင်ဆေးတွေက ရက်သတ္တပတ် သို့ လနှင့် ချီပြီး ကြာတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် Acne (ဝက်ခြံ) ပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင်ကော?
တချို့ ကလေးတွေမှာ ဝက်ခြံပေါက်ခဲကြပါတယ် – (ဖိုးကံကောင်းလေးတွေ!) သို့သော် ကလေးတော်တော်များများက ဝက်ခြံမပေါက်အောင် ကာကွယ်ကြသော်လည်း ပေါက်ကြတာပါပဲ။ ဒါဟာ လုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။ တချို့မိန်းကလေးတွေမှာ ဆိုလျှင် မီးယပ်သွေး ပေါ်ခါနီးလျှင် ဝက်ခြံပေါက်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ အဖြစ်များတဲ့ မီးယပ်မတိုင်မှီ ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ခန္ဒါကိုယ်တွင်း ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ယောင်္ကျားလေးတွေမှာလည်း ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့ ဝက်ခြံအမျိုးအစားတွေ ပေါက်တတ်ပါတယ်။
သင်ဝက်ခြံ ပေါက်ခဲ့ရင်တောင် ပိုတော့ မဆိုးချင်မှာ အမှန်ပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် သင့်ဝက်ခြံတွေကို လက်နှင့် မကိုင်မိအောင် သတိထားဖို့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံဖုကို မဆိတ်၊မညှစ်၊ မဖောက်ပါနဲ့။ ဝက်ခြံကို လက်ဆော့တာကြောင့် ဝက်ခြံတွေက ရောင်လာပြီး ပေါက်ထွက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ကအဆီကလည်း ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ဝက်ခြံကို ဆိတ်ခြင်းကြောင့် အမာရွတ်တွေ ကျန်ခဲ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့တွေက နေပူထဲမှာ ထိုင်နေလျှင် ဝက်ခြံပျောက်တယ်ဆိုပြီး သင့်ကို ပြောပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါ မှားနေတာပါ။ နေလောင်ခံခြင်းက ဝက်ခြံတွေကို ဖုံးကွယ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ပျောက်သွားသယောင်ရှိပေမဲ့ လုံးဝပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အရမ်းနေလောင်ခံတာလဲ မကောင်းပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ နေလောင်တာဟာ တစ်ချိန်ကျရင် အသားရည်တွန့်ခြင်းနှင့် အရေပြားကင်ဆယတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံ အခြေအနေဆိုးရွားတဲ့ ကလေတွေက သူတို့ရဲ့ ဆရာဝန် သို့ အရေပြားအထူးကုနှင့် ပြသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက သင်ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်လို့ရတဲ့ ဆေးထက် ပို ပြင်းတဲ့ ဆေးတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံဆေးညွှန်းတွေမှာ ဝက်ခြံဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးပေးတဲ့ သို့ အရောင်ကျစေပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေကို သတ်ပေးတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါဆို သင့်မှာ ဝက်ခြံရှိလာခဲ့လျှင် အရေပြားကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အခု သင်သိသွားလောက်ပါပြီ။ ပြီးတော့ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှတ်ထားပါ။ သင့်ဘေးက သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ကလေးအများစု နှင့် ဆယ်ကျော်သက်တော်တော်များများဟာဒီဝက်ခြံပြသနာတွေမှာ အတူတကွ ပါဝင်ပတ်သက်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။